ဟုတ်တာပြောတယ်လို့ မှတ်ပါ | MoeMaKa Burmese News & Media
March 24, 2012ကာတွန်း – ကူမိုးကြိုး
ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - လက်ရှိ မြန်မာ့ပညာရေး	အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - လက်ဖက်ရည်ရောင်းသမားဘဝမှ နုိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သုို့	ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ - အပါယ်နဲ့ဝေးတဲ့လူ	တူမောင်ညို - စစ် + ခရိုနီခေတ်မှာ ဗိုလ်ကြီး “ကယ်ရီ” ဖြစ်ပြီ	ဂါမဏိ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှာ လက်မှတ်ထိုးစရာ ...	ငြိမ်းချမ်းအေး - ကျနော် မန်ယူပရိသတ် ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း	ကျော်ဟုန်း - အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း	အောင်ဝေး - ရ န် ကု န် ချီကျောင်းသား သ ပိ တ် တ ပ် ကြီးဘွဲ့( အ ပို င်း- ၄ ၊ နိ ဂုံး)	ဇော်ထွဋ် - လေဆိပ်	ကာတွန်း ATH - စစ်သား စုဆောင်းရေး	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများလူသားအကျိုးပြုသင်တန်းများ တက်နိုင်ပြီ
စာပဒေသာ ကောက်စာများပန်းချီ … နှစ်
ခင်မြဇင်ရဲ့ ၀တ္ထုတိုတပုဒ် ... လူသား ... သံယောဇဉ် ... နာကျည်းမှု ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) ၏ Use The Right Word အဓိပ္ပါယ်တူအသုံးအနှူန်းကွဲပြားသောစကားလုံးများ
Twitter: moemakaငြိမ်းချမ်းအေး – ရှက်လို့ရေးတဲ့စာ http://t.co/VzhykKPZZ4 about4hours ago ReplyRetweetFavoriteသက်ခိုင် – တမိုးသောက်တဲ့အခါ http://t.co/mQzQSbBLsL about5hours ago ReplyRetweetFavoriteကာတွန်း ATH – စစ်သား စုဆောင်းရေး http://t.co/skWK9kt7Pa about6hours ago ReplyRetweetFavoriteဇော်ထွဋ် – လေဆိပ် http://t.co/PnD4vWvt9l about 10 hours ago ReplyRetweetFavoriteလင်းနွေးအိမ် – ကျောင်းသားဆို စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားနဲ့ http://t.co/SUCNwfz96v about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
By admin မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ၊ (အတွဲ၁၊ အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၄) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၄၊ ၂၀၁၄...Read more » Recent CommentsUN-NC on ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ – အပါယ်နဲ့ဝေးတဲ့လူadmin on ကျော်ဟုန်း – အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းBa Ba Gyi on ကျော်ဟုန်း – အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းHla Cho on ငြိမ်းချမ်းအေး – တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ်သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့ တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း -၄) - Myanmar Information Zone on သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့ တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း -၄)သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ